Ntuziaka iji nweta ngwa ngwa backlinks na ọkwa na Google Iji AI | Martech Zone
Ntuziaka iji nweta ngwa ngwa backlinks na ọkwa na Google Iji AI
Mọnde, Febụwarị 28, 2022 Mọnde, Febụwarị 28, 2022 Vaibhav Namburi
Njikọ azụ na-eme mgbe otu saịtị jikọtara na weebụsaịtị ọzọ. A na-akpọkwa ya dị ka njikọ inbound ma ọ bụ njikọ mbata na-ejikọta na saịtị dị n'èzí. Ọ bụrụ na azụmahịa gị na-enweta ọtụtụ backlinks na ebe nrụọrụ weebụ gị site na saịtị ikike, mgbe ahụ, a ga-enwe mmetụta dị mma karị na ọkwa gị. Azụ azụ dị oke mkpa maka njikarịcha ọchụchọ (SEO) atụmatụ.
The mee-eso njikọ mbanye search engine ikike… mgbe ụfọdụ mara dị ka jikọta ihe ọṅụṅụ ma nyere aka n'ịkwalite ọkwa nke saịtị njikọ. Ọ na-enyere aka n'ọkwa dị elu na ibe nsonaazụ search engine (SERP) Na enweghị-eso njikọ adịghị. Ebe a ka mkpado HTML anaghị eso dị ka:
Mkpado na-esoghị nke a na-egosi engines ọchụchọ agaghị agụta nke a. Ntuziaka Google Webmaster na njikọ iji jide n'aka na azụmahịa gị na-enweta backlinks dị elu, ọ bụghị atụmatụ njikọ.
Mkpa nke backlinks maka azụmahịa
Backlinks bụ ihe dị mkpa n'ọkwa maka search engine Google. Nrụpụta azụlink bụ akụkụ dị mkpa nke njikarịcha njin ọchụchọ. Na mgbakwunye, ọ bụ ụzọ isi ebugharị okporo ụzọ organic na webụsaịtị gị site na nchọta ọchụchọ. Igwe nchọta dị ka Google na-eji njikọ ahụ wee rịa webụ. Site na ngwakọta nke na ibe SEO, ọdịnaya dị elu, ahụmịhe onye ọrụ magburu onwe ya, njikọ njikọ ga-abụ ihe kachasị dị irè maka ịkwọ ụgbọ ala ọzọ.
Ogo nke njikọ, mkpa, na ikike nke saịtị njikọ ahụ nwetara dị mkpa na usoro njikọ njikọ. Ọ bụrụ na azụmahịa ahụ na-ewulite njikọ dị elu, ọ ga-enwe ọganihu ogologo oge na nsonaazụ ọchụchọ organic.
Mee Brand - Ọ ga-eme ka visibiliti ika gị dị n'ịntanetị. Ezigbo backlinks na-akwalite azụmahịa gị, ọ na-egosikwa na ị bụ ikike n'ọhịa site na njikọ dị mkpa na ọdịnaya.
Nwee mmekọrịta - Mgbe ị na-arụ ọrụ njikọ njikọ, azụmahịa gị ga-erute ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ndị na-eme ihe, ndị ọkachamara na niche ụlọ ọrụ. Ọ ga-emepụta mmekọrịta dị ogologo n'etiti ụlọ ọrụ abụọ ahụ bụ ndị bara uru.
okporo ụzọ ntụnye aka - Njikọ dị mma na-akwalite okporo ụzọ na ọkwa ọkwa na SERP. N'ihi ya, ọ ga-akwalite ahịa gị.
White Hat SEO megide okpu ojii SEO
Usoro njikọ njikọ nwere ụzọ ziri ezi na nke na-ezighị ezi iji wuo njikọ na ebe nrụọrụ weebụ gị. Otú ọ dị, ụzọ njikọ njikọ ga-enyere aka maka ogologo oge vivisibility na arụmọrụ nke saịtị. Azụmahịa gị kwesịrị ịgbaso nke a ntuziaka webmaster iji wuo njikọ dị mma.
White okpu SEO bụ usoro ziri ezi maka iwulite njikọ njikọ. Ụzọ ụlọ njikọ SEO ọcha nwere ike ịgụnye ndị a
Njikọ Ụlọ Ebiri
Ụlọ Njikọ Listicle
Ntinye Infographic ụlọ
Na-ekwu na blọgụ ikike
Na-eme ndepụta azụmahịa na akwụkwọ ndekọ aha weebụsaịtị
Njikọ zoro ezo, nri okwu isiokwu, atụmatụ njikọ bụ ụzọ oji ojii SEO ụzọ. Ọ bụ usoro na-adịghị mma iji kwado webụsaịtị na igwe nchọta. Ọ ga-eduga na ntaramahụhụ.
Otu esi amata njikọ spammy ma ọ bụ njikọ egbu egbu
Njikọ spam ma ọ bụ njikọ na-egbu egbu ma ọ bụ backlinks ọjọọ, ma ọ bụ njikọ na-ekwekọghị n'okike sitere na ebe nrụọrụ weebụ spam. Ndị a backlinks spammy ga-ebelata ọkwa weebụsaịtị gị. Na mgbakwunye, backlinks ndị dị otú ahụ na-egbu egbu na-egosi engines ọchụchọ (Google) na ebe nrụọrụ weebụ gị enweghị àgwà ma ọ bụ ọdịnaya iji nweta njikọ n'onwe ya.
Njikọ ndị na-egbu egbu na-eduga na ntaramahụhụ Google ma na-emetụta okporo ụzọ weebụsaịtị. Njikọ ndị a na-ewere dị ka spam backlinks na-esote SEO metrics.
Akara spam dị elu
Otu ibe nwere njikọ ọpụpụ 100+
Edeghị aha ngalaba na nchọ ihe
MozRanks dị ala
Obere ngalaba ikike
Ikike ibe dị ala
Usoro ntụkwasị obi pere mpe
Ntụle ndị dị ala na-eru
A na-enyocha backlink spam site n'enyemaka nke Backlinks ngwaọrụ dị ka Moz, ahref, Ebube, Semrush, na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-eji aka gị na-enyocha backlink, ị ga-ahụ ụfọdụ backlinks spam na-emekarị ka ị lelee ya.
Nweta njikọ spam ọ bụla sitere na ngalaba ntaramahụhụ
Njikọ sitere na akwụkwọ ndekọ aha njikọ spam na njikọ ugbo
Chọpụta ma jikwaa nkọwa blọọgụ spam
Nweta njikọ sitere na asụsụ mba ọzọ ma ọ bụ webụsaịtị na-adịghị mkpa
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke backlinks sitere na weebụsaịtị enweghị njikọ.
Njikọ sitere na ederede arịlịka emelitere karịa
Nweta njikọ sitere na ọdịnaya oyiri
Amamịghe echiche (AI) NA SEO
Ọtụtụ algọridim nchọta ọchụchọ, gụnyere Google Bert na Rankbrain algọridim AI, aghọwo akụkụ bụ isi. AI ghọrọ akụkụ dị mkpa nke ndị mmadụ, dịka ọmụmaatụ Alexa, Siri, Google Home. Ọtụtụ ụlọ ọrụ dị elu dị ka Amazon, Google, Apple, ngwaahịa Microsoft na-arụ ọrụ na iwu olu ma ọ bụ nchọ olu. Ya mere AI na-arụ ọrụ dị mkpa na njikarịcha search engine.
Na mgbakwunye, ngwaọrụ Artificial Intelligence (AI) na-ekere òkè dị ukwuu na nyocha data. Dịka ọmụmaatụ, ọ na-enyere aka ịchọta isiokwu ndị na-agbanwe agbanwe iji chọpụta ọdịiche dị n'ime ọdịnaya, kwalite mgbasa ozi ụlọ njikọ gị dị ugbu a, wdg.
A na-eji ngwanrọ AI dị iche iche mee ihe na ọkwa dị iche iche nke usoro njikọ njikọ. Ngwá ọrụ AI ndị a na-enyere aka na usoro nchịkọta data, na-achọpụta isi okwu ndị dị mkpa, nyochaa weebụsaịtị, chọpụta mkpa ọdịnaya weebụ na SEO-enyi na enyi, ịchọta mmetụta / ndị na-ede blọgụ, mgbasa ozi email ahaziri iche, na ndị ọzọ.
Ntuziaka iji nweta backlinks na ọkwa na Google Iji AI
Mepụta backlinks na ụzọ ndị ọbịa
N'ime afọ ole na ole gara aga, ọdịnaya na-anụ ọkụ n'obi na Punch visual na-arụ ọrụ nke ọma na SEO. Dị ka otu Unbounce ọmụmụ, ịchọ infographics abawanyela na 800%. Ọzọkwa, 65% nke ndị mmadụ bụ ndị mmụta anya.
Eziokwu ndị a na-egosi Infographics bụ nnukwu ngwá ahịa ahịa maka azụmahịa. Infographics bara uru maka iwulite njikọ yana ire ọdịnaya maka azụmahịa gị. Brain Dean butere ụzọ ahụ usoro ụlọ njikọ guestographic. Gbalịa, usoro ụlọ njikọ ndị ọbịa kacha ewu ewu maka azụmahịa gị, yana ha bụ ụzọ isi wuo okpu ọcha na-enweghị atụ.
Usoro njikọ njikọ guestographic gụnyere usoro ise ndị a.
Bipụta ozi dị elu na webụsaịtị gị.
Chọpụta webụsaịtị na-ede maka otu isiokwu.
Kekọrịta ha ozi gị.
Nye ha ọdịnaya pụrụ iche.
Nweta backlinks gburugburu gị.
Azụmahịa gị nwere ike iji BuzzSumo na Mgbakwunye Ninja ịchọpụta mmetụta na niche gị kpọmkwem. Wee depụta ndị mmadụ ma mee mgbasa ozi ahaziri onwe ya. Mee ka okwu gị erughị 90.
Ihe nlele ozi-e
Ozugbo ndị mmadụ zara email mbụ gị, nye ya n'efu infographic ma weta okwu mmeghe dị mkpirikpi nke nwere okwu 150-300. Na-esote, jụọ ma ha dị njikere ịkesa infographic gị na webụsaịtị ha ma ọ bụrụ na ha ekweta na ị nwere ike nweta backlink gburugburu maka saịtị gị. Ụzọ a na-ewu njikọ dị mma iji wuo backlink dị elu site na infographics.
Isi Iyi: Backlinko
Ngwá ọrụ dabere na ọgụgụ isi arụ ọrụ iji chọpụta ohere
Akụkụ kachasị mkpa nke SEO bụ ịchọta ohere ọkwa zoro ezo. Daalụ maka ọgụgụ isi SEO software nke na-enyere aka ịkwalite ọkwa saịtị gị. AI ga-akwalite nghọta gị na nyocha isiokwu ezubere iche, echiche isiokwu, oghere ọdịnaya, ohere njikọ njikọ, imepụta ọdịnaya na usoro, na ndị ọzọ.
Ịchọta ohere iji melite backlink aka na-ewe oge dị ukwuu na ịrụsi ọrụ ike. Mana na ngwa AI dị ka BrightEdge, MarketBrew, Mepee AI, Enwere m ike ọkwa, WordLift, Mkparịta ụka, Alli AI, SE .nye ọkwa, Smart Odee, Acrolinx, wdg. Ọ na-enyere azụmahịa gị aka ikpughe ohere ngwa ngwa ma melite SEO gị. Na mgbakwunye, ngwaọrụ dị ka Moz, Majestic, ma ọ bụ Ahrefs na-enyere aka ịghọta backlink gị na nyocha. Ya mere tinye ngwanrọ AI na atụmatụ SEO gị ma melite ọkwa gị.
Nweta njikọ dị mma site na nchịkọta ndị ọkachamaras
Akụkọ gbasara ndị ọkachamara bụ ụzọ magburu onwe ya iji mepụta njikọ na ọdịnaya gị. Ọ bụkwa otu n'ime atụmatụ ịre ahịa ọdịnaya. Na mgbakwunye, akwụkwọ mpịakọta ndị a bụ ụzọ dị mma iji kpughee ndị na-ege gị ntị na ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ gị ma nweta nghọta ha na otu isiokwu.
Mkpesa ndị gbakọtara bụ ọdịnaya sitere na ndị ọkachamara ụlọ ọrụ na otu isiokwu iji kesaa echiche na echiche ha. Ihe atụ kachasị mma maka nchịkọta ọkachamara bụ a Akụkọ mara mma na ire ọdịnaya.
Ị nwere ike iji usoro a ka ịchọta njikọ maka webụsaịtị chịkọta.
Azụmahịa gị nwere ike iji ngwaọrụ dịka Mgbakwunye Ninja iji mee ngwa ngwa ịchọpụta ndị na-eme ihe n'otu niche yana iji ozi-e ahaziri ahazi gakwuru ha. Dị ka kwa Usoro Brian's Skyscraper, Izipu ozi ịntanetị nkeonwe na-enyere aka nweta ezigbo backlinks.
Smartwriter AI na-enyere aka izipu ozi ịntanetị nkeonwe / ahaziri iche nke icebreakers. AI dị na ngwanrọ ahụ ga-enye data ozugbo ma ọ bụ ozi nke ụzọ ọ bụla. Ya mere, ị nwere ike ịnye ọkwa pụrụ iche na ndị ọkachamara na-emeziwanye ọnụego ọganihu gị. Mgbakọ ndị ọkachamara nwere ụfọdụ uru ogologo oge na okporo ụzọ webụsaịtị, Inweta ikike, na nnabata ndị ọgbọ.
Atụmatụ Nrụpụta Njikọ emebiela
A na-akpọkwa ụlọ njikọ ahụ agbajiri dị ka ụlọ njikọ nwụrụ anwụ. Iwuli backlinks dochie njikọ na ibe 404 na njikọ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ lekwasịrị anya bụ omume nke iwulite backlinks. Ị nwere ike iji ahrefs gbajiri njikọ checker ịchọta njikọ ndị gbajiri agbaji na webụsaịtị.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ na-achọta ebe nrụọrụ weebụ nwere ikike nwere njikọ gbajiri agbaji na-atụ aka na ibe njehie 404 ma na-enye akụkụ ọzọ nke ọdịnaya ma ọ bụ akụkọ. Ọ bụ usoro kachasị dị irè maka ịmepụta njikọ siri ike. Ọ bụ mmeri-mmeri maka ma webmaster na azụmahịa gị. Onye na-elekọta weebụ nwere ike idozi njikọ ha mebiri emebi site na iji njikọ dị mma dochie ha na weebụsaịtị gị.
SmartWriter na-enyere gị aka ịme mgbasa ozi email ahaziri onwe ya maka ụzọ iji wuo njikọ mebiri emebi. N'ihi ya, azụmahịa gị nwere ike nweta 2x ọzọ backlinks nwere ultra personalization site na iji AI software. Nhazi backlink nke SmartWriter nwere atụmatụ atọ.
na Rịọ ka Dochie Njikọ Njikọ atụmatụ, ngwá ọrụ na-arịọ gị ka jupụta na-esonụ ubi. Ozugbo i jiri otu bọtịnụ mechie ha, ị nwere ike ịmepụta ozi-e nke ahaziri iche maka mgbasa ozi SkyScrapper Technique (Nke a na-eme ka onye nata ya mara banyere isi ihe ma kọwaa ihe kpatara nke gị ji dị mma karịa njikọ asọmpi.)
Nweta ezigbo njikọ azụ azụ na akụkọ ntuziaka doro anya
A na-amakarị ntuziaka doro anya dị ka usoro skyscraper. Iji usoro Skyscraper bụ ụzọ kachasị mma isi wuo ọdịnaya na ịzụlite backlinks site na saịtị ikike. Nchọgharị ọchụchọ na-aka mma ma ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ọdịnaya ka mma. Daalụ RankBrain, Google rie , Hummingbird algọridim.
Nke a bụ isi nzọụkwụ atọ maka usoro skyscraper:
Kwụpụ 1: Chọpụta ọdịnaya kwesịrị ekwesị njikọ
Kwụpụ 2: Ime ọdịnaya izizi ka mma
Kwụpụ 3: Ịgakwuru ndị ziri ezi iji kwalite njikọ na ịkekọrịta
Jiri ngwanro AI iji nyere usoro okike ọdịnaya aka. Taa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri blọọgụ ọdịnaya na ịntanetị, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu nde ọdịnaya ọhụrụ na-agbakwunye kwa ụbọchị. N'ihi ya, a na-ajụ ajụjụ ihe karịrị ijeri 3.5 kwa ụbọchị na ọchụchọ google.
Ịnye ọdịnaya pụrụ iche na nke dị elu dị ezigbo mkpa maka azụmahịa, ngwa AI dị ka BuzzSumo na-enyere azụmahịa gị aka ịchọta isiokwu ndị na-ewu ewu. N'otu aka ahụ, jiri ngwa AI dị ka SmartWriter, Frase, Grammarly iji kwalite ọdịnaya na-akpaghị aka.
Ọmụmaatụ, Frase bụ ngwa dabere na AI nke na-enyere ọdịnaya gị aka ịkwalite na-akpaghị aka maka ọchụchọ olu. Akụrụngwa Grammarly na-achọpụta mperi typo, Plagiarism ma hụ na ọdịnaya dị pụrụ iche. SmartWriter AI na-enyere gị aka ịmepụta aha blọọgụ Pụrụ iche, Intro Blog (Intro kacha mma maka ndị na-ege gị ntị), Nkọwa blọọgụ (Na-arụ ọrụ kacha mma maka “ngụkọta” ọdịnaya gị ma ọ bụ “otu esi eme” ọdịnaya), Okwu Mgbatị blọọgụ, wdg. teknụzụ AI nwere ike inyere gị aka. ịmepụta ọdịnaya SEO ka mma.
Debanye aha maka Smartwriter.ai
Tags: ainjikọ azụlinkbacklinkobacklinksokpu ojii seogbajiri njikọ ụlọndepụta azụmahịabuzzsumoịza ajụjụmee-esoikike ngalabanzisa ozi emailn'ịwa njikọgoogle eriblogging ọbịaguestographicshummingbird algọridimụlọ njikọjikọta ihe ọṅụṅụnkwado njikọụlọ njikọ listiclemozrankihe gbasara ninjaenweghị-esoikike iberankbrainogoarịrịọ njikọchịkọbachịkọbamkpọchi postsagwoonye ode akwukwo ainjikọ spammynjikọ nsintụkwasị obi na-asọbaakwụkwọ ndekọ aha weebụsaịtịacha ọcha okpu seo